1. Kune mamwe madhishi anonaka ayo ari akareruka kuita, uye ndiwo mamamenyu epamusoro kutenderera pasirese mumazera ese. Nekuti ine hwema hunokwezva Yakapfava uye inotsvedza kuravira Matches nemhando dzakawanda dzepadivi ndiro Shongedza zvakanaka zvinoenderana nekuravira kwako kana zvaunazvo pamba zvakakwana. Uye imenyu inogona kuitwa nevana Wedzera kunakidzwa uye kutapira kumazororo kana mukati mevhiki nemabasa akapusa. Asi inonzwa yakakosha Uye maitiro ekugadzira mapancake Kunyangwe iri nyore menyu Asi ipa ndangariro munzvimbo dzese dzinobata zvechokwadi
2. Svika pakuziva yakakurumbira menyu pancake, iyo Pancake (Pancake) inoonekwa semhando yekeke kana chingwa chakatsetseka. Kushandisa mbishi zvigadzirwa zvakagadzirwa neupfu hwakasanganiswa nemukaka, bota, mazai, shuga kana chero munhu angamonyoroka asi achida Nekuunza hupfu hwakatsva nemafuta kana bota kusvikira wabikwa Naizvozvo izwi rekuti Pan rakabatanidzwa Ndiwo mabviro ezita rekuti dhizeti, mapancake akadyiwa kupisa Sekuseni Kana kushongedza nesirasi Uchi nemichero Zvakare pamwe nechokoreti Izvo zvinogona kuitwa nenzira yatinofarira isu nemhuri.
3. Zvimwe zvekugadzira mapancake zvinozivikanwa semidziyo ingangove nekicheni yega yega inenge iine pairi, chero kutenga kwekuwedzera. • Hura yegorosi • Shuga • Munyu • Poda yekubheka • Mazai • Vanilla flavour • Butter
4. Nzira yekugadzira makeke Menyu inonakidza uye inonaka • Dururira hupfu hwegorosi, shuga, munyu, upfu hwebibiki mundiro uye fambisa zvinhu zvose pamwe chete. Wobva wamutsa zvinhu zvese pamwechete kusvikira zvafanana. • Kana kumutsa kwapera. Sungunusa bhotela mumvura. Gadza padivi kudziya, wedzera bhotoro uye unomutsa kusvikira wafanana. Isa parutivi chinguva. — Flat pani pamusoro pemhepo iri pakati. Kusvikira pani yatanga kupisa • Kana iyo poto yatanga kupisa pa Wedzera bhata shoma.
5. • Kune runako rwekugadzira makeke, sarudza gorofa rakapetwa Chimiro chakakurumbira chinotenderera. Saizi chero chaunoda Kana chero munhu ane pendi anogona kuisa pani pairi uye nekuwedzera batter yepancake. Kusvikira mapancake asviba, tsvarakadenga.
6. Mumamiriro ekunze anotonhorera, ingoita zvinonaka uye zvinonaka mapekeki uye unwe netii, kofi kana cocoa inopisa. Inobatsira kugadzira mamiriro akapusa Kudziya uye kunaka Uyezve menyu iyo vana vanogona kuzodza sezvavanoda Zvakare nekushongedza mahwendefa senge hunyanzvi husina kukwana Kuti kunotonhora Ngatiwedzerei kudziya neyakareruka nzira yekugadzira mapancake ekugadzira mufaro wemhuri yako !!!